बेलायती सेनामा भर्ती हुने नेपाली चेली ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
बेलायती सेनामा भर्ती हुने नेपाली चेली !
ब्रिटिस आर्मीको इन्टेक २०२० का लागि पोखरामा भएको केन्द्रीय छनोटबाट ४ सय ३२ जना गोर्खाली ठिटा बेलायती सेनामा भर्ती भए। सँगसँगै १ सय २० सिंगापुरे पुलिसका लागि छानिए यो वर्ष। माघ १७ गते यो नतिजा सार्वजनिक हुँदा ब्रिटिस आर्मी बन्ने सपना सजाएका युवतीको मनमा
भने खुसी छाएन। हृष्टपुष्ट पुरुष युवा जसरी काँधमा काँध मिलाउन तम्तयार किशोरीहरुले पनि यसपालि बेलायती सेनामा भर्ती हुने सपना देखेका थिए, तर सपना केवल सपनामै सीमिति रह्यो। बेलायत सरकारले इन्टेक २०२० मा नेपाली युवतीलाई पनि भर्ती लिने सूचना जारी गरेको थियो। यसबारे बेलायती पत्रपत्रिका र नेपालका राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा खबर आएका थिए। तिनै खबरका आधारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने सपना देखेका नेपाली युवतीको सपना पूरा नहुनुको कारण यो वर्ष पनि बेलायती सेनामा महिलालाई भर्ती नलिनु हो। बेलायतले नेपाली युवतीलाई पनि सन् २०२० देखि भर्ती लिने बताएपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिले नेपाली महिलालाई बेलायती सेनामा नपठाउन निर्देशन दिएको थियो।
पोखरामा तीन दर्जनभन्दा बढी त्यस्ता इन्स्टिच्युट थिए, जसले बेलायती सेनामा भर्ती हुनेका लागि तालिम दिन्थे। धेरै पुरुष र थोरै महिलालाई तालिम दिएका त्यस्ता संस्थाहरुमा केही मात्रामा युवतीहरुले तालिम लिएका थिए। पोखरा बाहिरका धरान, काठमाडौं, दाङ लगायतका सहरमा गरी त्यस्तो चाहना राख्ने महिलाको संख्या करिब २ हजार थियो। जुनियर गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक राजु थापाका अनुसार सेन्टरमा पाँचजना युवतीले तालिम गरिरहेका छन्। ‘भर्ती खुल्ने भन्ने खबर पाएपछि उनीहरुले तालिम गरेका हुन्। भर्ती नलिने भएपछि तालिम नगराउने भनेको थिएँ तर, उनीहरुले नेपाली सेनाका लागि तयारी गर्दैछन्’ राजु भन्छन्, ‘दुईजना आइए पास भएका छन्। उनीहरु ब्रिटिस आर्मीमा नपाएपछि नेपाली सेनाको सेकेन्ड लेफ्टीनेन्टमा भर्ती हुनका लागि तालिम गरिरहेका छन्।
Previous नेपालीलाई ल्याउन फागुन ३ गते वाइड बडी चीन जाने
Next नेपाल आइडल: माम्पीले मागिन् माफी